Amanqaku angaphambili kwiphepha kwiiGofumadas
Izazinzulu zedatha, iinjineli ze-GIS, kunye nabaphuhlisi besoftware e-EOS, inkampani eseCalifornia, kutshanje ikhuphe isixhobo esisekwe kwilifu esenza ukuba abasebenzisi, iintatheli, abaphandi, kunye nabafundi bakhangele kwaye bahlalutye izixa ezikhulu zeedatha ezihlaziyiweyo Ukuqwalaselwa komhlaba. I-LandViewer yinkonzo yokuqhubekeka ...
Okufumaneka, Geospatial - GIS, ezintsha
Isixhobo esisetyenziswayo sokujonga izitrato kunye neeNkqubo ziyimveliso yamava eminyaka nenxalenye yabathengi. Ukusuka kumthengi wabo wokuqala ovelisa imidwebo yeekhathuni e-Bogotá, eColombia, bandise abathengi babo kuwo onke amazwekazi omhlaba, banegalelo kwiiprojekthi ezahlukeneyo nakwimizi-mveliso. Ukusetyenziswa kwezixhobo zabo kubanzi ngendlela esinokucinga ngayo, sithathela ingqalelo into encinci ngo ...
I-Bentley Systems yazalwa njengeshishini losapho, ngelo xesha lama-80s xa ubuchwephesha obutsha basebenzisa le migaqo yafumana ilizwe laseMelika, apho ngokungafaniyo namanye amazwe: umbono, ukusebenza nzima kwaye wenze into elungileyo phantse ziqinisekiso zempumelelo. Kumazwe anomxholo waseSpain, ipesenti ephezulu yamashishini osapho ...